Ciyaartoyda PlayStation-ka: Battle Royale ayaa Dhab ahaantii u imanaya PS Vita - Dhaqanka Pop
Ciyaartoyda PlayStation-ka: Battle Royale ayaa Dhab ahaantii u imanaya PS Vita
Dusha sare ee malaha 'washy' laga bilaabo agaasimaha ciyaarta ee ku saabsan haddii Ciyaartoyda PlayStation: Battle Royale , Jawaabta Sony ee Nintendo Super burburin Bros. , waxay garaaci lahayd PS Vita, hadda waxaa jira caddeyn cusub oo muujineysa in ciyaarta runtii la qaadi karo.
Isticmaalaha Linkedin ayaa sheeganaya astaantiisa in uu ka shaqeeyay muusigga labada PS3 iyo Noocyada PS Vita ee Dhammaan Xiddigaha . Waxaan rajeyneynaa inuusan dhibaato badan ku qabin daadinta nuqulkan, sidii aan horeyba u filaynay.
Keenaya Dhammaan Xiddigaha PS Vita wuxuu Sony siin lahaa lug ka sarreysa Nintendo, oo aan waligeed dhibin keenista Burburin Bros. nidaamka la qaadan karo. Laakiin Vita waxay u badan tahay inay xamili doonto fowdada afarta ciyaaryahan iyo sidoo kale PS3. Hadda ma hubno nooca aan heli doonno.
Ma ku faraxsan tahay inaad barato hubaal? Noocee ayaad heli doontaa? Noo sheeg faallooyinka ama daaran Twitter .
[via Ciyaaryahanka Jeebka ]
Daawo Samuel L. Jackson oo ka Akhrinaya Hadalkiisii ​​Sheekooyinka Qulqulka Pulp oo dhan Xusuusta
Rob Kardashian iyo Blac Chyna waxay na tusaan Jacaylku inuu ku murugsan yahay Rob & Chyna Teaser
Gabadha Saaxiibka ah ee Internetka ee Faalsada ah: Xiriirka Fiican ayaa ah midka aanad la yeelan Naftaada
Tracy Morgan ayaa ku dhawaaqday inay soo qaadanayso Goobaha Istaagista
Starz wuxuu ku dhawaaqayaa Sadex Taxane oo Kaabis Xoog leh
sida loo sameeyo orso gummy oo macmal ah
keega velvet buluugga ah vs keega velvet cas
5 -ta ciyaartoy ee ugu sarreeya nba hadda
kooxaha nba ugu weyn abid espn
Ciyaarahan Emmy-Magacaabay ee Jilayaasha carshiga ayaa is-dhiibay markii HBO uusan soo galin
HBO waxay tirtiraysay tiro aad u cajiib ah magacaabistii Emmy oo loogu magac daray Ciyaartii Thrones ee khiyaaliga ahayd horaantii toddobaadkan.
Dib -u -eegid: Qosol badan oo Qalbi furan, Seth MacFarlanes Ted Waa Majaajilada Xagaaga ee La Garaaco
Hal -abuurayaasha Guy Family -ka ee ugu horreeya shaashadda weyn ayaa dareenkiisa sii ilaaliya halka ay sidoo kale muujinayaan koboc badan.
Taika Waititi wuxuu u abuuri doonaa laba Charlie oo la daawan karo iyo Taxanaha Warshadda Shukulaatada ee Netflix
Taika Waititi ayaa laga yaabaa inay tahay ninka ugu mashquulka badan Hollywood.